घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो "एन्ड्रय गोम्स". हाम्रो आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मिति सम्मको समय सम्म पुग्दछ। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्नका साथै समावेश छ।
हो, सबैले आफ्नो प्रभावशाली सामरिक क्षमता र जागरूकताबारे उनीलाई खेलमा ल्याउने बारे जान्दछन्। तथापि, केवल केहि थोरै एन्ड्रोइड गमोन जीवनीलाई विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- बाल्यकाल
सुरू गर्न, उनको पूर्ण नाम एन्ड्रे फिलिपिपा टावर्स गमोहरू छन्। आन्द्रे गोमेक्स को रूप में जाना जाता है जैसे कि जुलाई 30 के 1993 वें अपनी मां, मारिया जूलिएता और पिता, ग्रेजु के कैसीमेरो गॉम्स, पुर्तगाल के पोर्टो जिला, विला नोवा डी गिया को जन्म हुआ था।
आंद्रे गोम्स आमाबाबु (को लागि क्रेडिट खेलकुद)
एण्ड्रोइड गमोहरू आफ्नो गृहनगर ग्रिजमा आफ्नो परिवारको सबैभन्दा सानो पुत्रको रूपमा वृद्धि भयो। यसको एक नागरिक पालिस 10,578 (2011 तथ्याङ्क) को जनसंख्या संग।
प्रारम्भिक, आन्द्रेले फुटबलर बन्ने निर्णय गरेको थियो, जुन उनले कहिल्यै पारित कल्पनाको रूपमा देखाएनन्। गर्व, फुटबल-मायालु आमाबाबु जो बलियो पोर्टो फ्यानहरू थिए उनीहरूको खोजीमा। यसले सुन्दर खेलको प्रेमको लागि प्राकृतिक रूपमा बनाएको छ, आफ्नो छोरा, आन्द्रामा पस्न सकिन्छ।
एक सानो केटाको रूपमा, आन्द्रे गमोहरू उनका बीचमा थिए जसले फुटबल बलमा केही मोल गरे। कहिलेकाहिँ उनीहरूले बटुल्न वा सुन्नु पर्ने फुटबलमा दिनहुँ घुम्न थाल्यो। अभ्यासमा आफ्नो शौक राख्नु, उनले स्थानीय फुटबल एकाइमा सामेल गर्ने निर्णय गरे।
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
उनको 10th जन्मदिन भन्दा पहिले, आर्यन Grijó, विला Nova de Gaia को स्थानीय क्षेत्रहरुमा फुटबल खेल्दै बित्यो। एफसी पोर्टोको अकादमीमा परीक्षाको लागि नामाकरण गर्दा उनको समर्थकले निश्चित रूपमा लाभांश लाभांश बसाए।
वर्ष 2005 मा एफसी पोर्टो अकादमी मा आंद्रे एक सफल परीक्षण था। यो सानो केटाले आफ्नो थैला प्याक गर्ने र एफएन पोर्टोमा सहभागी गर्न 22 किलोमिटर भ्रमण गर्थे।
एन्ड्रयू गोम्स यात्रा एफसी पोर्टो- बचपन स्टोरी (Google नक्सा र जेएनमा क्रेडिट)
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि
एन्ड्रयू गोम्स क्लब मा आफ्नो शुरुआती वर्ष को समयमा एफसी पोर्टो को लागि आफ्नो जुनून को स्वीकार गरे। सामेल हुँदा, यसले छाप पारेको धेरै समय लागेन। जवान आन्द्रेले धेरै चाँडै आफ्नो टोलीको कप्तान बन्ने स्थानमा पुगे।
एण्ड्रोइड गोम्स एफसी पोर्टो अकादमी। क्रेडिट JN
एफसी पोर्टो जस्तै प्रतियोगी युवा अकादमीको अपेक्षाहरू पूरा गर्न असफल भए निश्चित रूपमा यसको परिणाम हो। दुर्भाग्यवश, गोमेक्सले उनको प्रदर्शन केही बिन्दुमा बिर्स्यो र तिनले मूल्य तिर्नुभयो। यस अनुसार जेएन पोर्चुगल रिपोर्ट, संसार अन्ड्रे गोम्स को लागि लगभग अलग भयो, जब त्यो ड्रैगन को पूर्व प्रशिक्षण समन्वयक, लुइस कास्ट्रो द्वारा खारिज भयो। यो दुखाइ र आघातको अवधि थियो।
"फुटबलमा, कहिलेकाहीँ तपाईं यसलाई सही पाउँनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ तपाईं सम्झनुहुन्छ, शायद, यस अवस्थामा, त्यहाँ केही गल्ती थियो, तर कुनै पनि अपरिहार्य थियो,"
निर्धारण र आत्म-विश्वासले आफ्ना डेरिभेसनहरू बिरोध गर्दा अर्को युवा क्लबलाई खोजी गर्न खोज्दै थिए। आंद्रे गोम्सले आफ्नो स्थानीय उपाध्यक्ष पास्तालेरारासँग आफ्नो क्यारियरको अर्को चरण लिनु भएको थियो जुन उनको अन्त मा समापन भयो।
क्लबको साथ एक वर्ष पछि, उनी बोवेस्तामा गए, जहाँबाट उनी एक स्थानीय टूर्नामेंट जित्नका लागि उनीहरूलाई सहभागी सहयोग दिए।
आफ्नो युवा क्यारियर को अन्तिम वर्ष को लागी, आंद्रे गोम्स ले ठूलो अकादमी को नामांकन गर्न को निर्णय लिया। उनले आफूलाई बेन्फिकामा एक सफल परीक्षण देखेका थिए जहाँ वरिष्ठ कैरियर पदोन्नति गर्नु अघि उनले आफ्नो पछिल्लो वर्ष जूनियरको रूपमा खेले।
बेन्फिकामा एन्डर्ड गॉम्स अर्ली वर्ष (बेनिफिका पावरमा क्रेडिट)
बेनफिकाको तीन वर्षको वरिष्ठ जीवनमा, आन्द्रे गोमेमले इतिहासमा पहिलो घरको ख्याति जित्ने क्लबलाई मदत गर्न मद्दत गरे। ट्रेबलमा लीग ट्राफी, कप ट्रफी र टेका डे लीगा समावेश छ र यो सबै भयो 2013-14 सिजन.
अन्डर गोम्स रोड फेम स्टोरी। (Instagram को लागी क्रेडिट)
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
जुलाई 2014 मा, एन्ड्रयू गमोहरू पहिले एफसी पोर्टो प्रबन्धक द्वारा लिइए पछि वालिसियामा सामेल भए नुनो एस्पिटोटो सान्टो। आन्ध्रको सुपर एजेन्ट जर्ज मिन्डिजको सम्झौता सम्भव भएकोले यो सम्भव भयो कि उनी दुवै र उनको प्रतिनिधित्व गर्दछ Nuno.
आंद्रे गोम्स वैलिसिया स्टोरी। क्रेडिट FourFourTwo
FourFourTwo को अनुसार, भेलिसियाले अन्ड्रे गोमेक्सको वरिपरि उनीहरूको रचनात्मक दृष्टिकोण निर्माण गरे जसको बिना, तिनीहरूले सट्टा, भविष्यवाणी र श्रमिक देखाए। तल वेलिसियामा आर्यको उत्कृष्ट अनुभवहरूमध्ये केही हुन्। भिडियोको लागि क्रेडिट Gesteur VCF.
तिनको उदयलाई प्रसिद्धिको लागि क्राउन प्रयास गरिसकेको छ, आन्द्रे गोमेन्स जसले पोर्चुगल राष्ट्रिय टोलीले बोलाइएको थियो उनको देश यूरो 2016 मा प्रतिनिधित्व गर्यो। उनी टूर्नामेंटमा पोर्तुगलको चमत्कारपूर्ण विजयमा एक स्टार खेलाडी हुन्। तल यूरो 2016 ट्राफी संग प्रस्तुत गोमेम को एक तस्वीर हो।
आंद्रे गोम्स यूरो 2016 ट्रॉफी के साथ poses। TheGuardian को श्रेय।
वलिसिनिया र पोर्चुगलमा उनको प्रदर्शनले उनलाई एफसी बार्सिलोना सहितको शीर्ष शीर्ष युरोपियन क्लबहरू द्वारा निगरानी गरीरहेको छ जसले उनलाई 21 जुलाई 2016 मा अधिग्रहण गरेको छ। Tछत्तीस लाख मिलियन, एड्स र बोनसले बलमा डी डी वा जीत जित्छ।
एफसी बार्सिलोनामा हुँदा, अन्डर गमोन्सले हट्ने भूमिका खेलेको थियो किनभने उनले आफूलाई उपस्थित गर्न असफल भए इवान रैटिक बार्सिलोना जसले उनलाई पैसा गुमाउन चाहँदैनन् उनलाई Everton को ऋणमा पठाउने निर्णय भयो जहाँ उनले क्यारियर नवीकरण गरे। एथटनको लागि उनको पहिलो लक्ष्य निश्चित रूपमा प्रिमियर लीग हेर्न सजिलो बनाउँछ।
इभरटन फुटबल क्लबको क्रेडिट। बाक्लो, जुन तिनीहरू भन्नुहुन्छ इतिहास हो।
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
आन्द्रे गोमेमका रोमान्सहरू एक व्यक्ति हुन् जसले सार्वजनिक आँखाको जाँचबाट बचाउँछ किनभने उनीहरूको प्रेम जीवन नाटक-मुक्त हो।
सफल फुटबलरको पछि, लिसा गोन्स्लेवको सुन्दर व्यक्तिमा ग्लैमरस वाग पनि छ। लिसा धेरै सुन्दर छ। तिनी प्रायः संसारका सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरु को रूपमा मानिन्छ।
सुन्दर लिसा गन्स्लेवल्स - आन्ड्रे गोम्स गर्लफ्रेंड (इन्स्टाग्राम को लागी क्रेडिट)
लिसा सेप्टेम्बर 13 मा, पोर्चुगल मा 1993 मा जन्म भएको थियो। उनीसँग अविश्वसनीय भौतिकी छ, जसले सबैलाई मनपर्छ। उनी दयालु, धेरै बुद्धिमानी, मजा, हेरचाह र रोमांटिक हुन्।
अनुसार FabWags, आंद्रे गोम्स बेनफिका में अपने समय के दौरान लिसा डेटिंग शुरू कर दिया। तिनीहरू मारियाना पेडोरोसँग समाप्त भएपछि उनको सम्बन्ध समाप्त भएपछि मात्र सुरु भयो। दुबै प्रेमीहरू सबै भन्दा राम्रो मित्रहरू थिए जुन पछि प्रेमी भए।
लिसा गोंस्लेव्सको साथ आंद्रे गोम्स लाइट स्टोरी (क्रेडिट FabWags)
तपाईंलाई थाँहा थियो?… लिसा गोंस्लेवहरू सुन्दर र दिमागको साथमा छन्। त्यो एक दन्त चिकित्सक हो जुन काम गर्दछ अस्पताल डी Valongo Valongo, पोर्चुगल मा स्थित छ।
आंद्रे गोम्स 'गर्लफ्रेंड- लिसा गोंस्लेभलाई उनको पेशा अभ्यास गर्दै (इन्स्टाग्रामको लागि क्रेडिट)
यो सम्भव छ कि त्यो उनको मान्छे Merseyside मा हुनु पर्छ।
प्रत्येक केटीले आफ्नो म्यानको परिवारलाई भेट्न सोचिरहेको छ "तिनीहरु मा वास्तविक व्यक्ति"। जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ, आन्द्रे गमोले लेजरलाई आफ्नो आमाबाबुलाई सफलतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ, जसले यो के देखिन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ।
आंद्रे गोम्स लिसा गोंस्लेवको साथ परिवार फोटो लिन्छ। ट्विटरमा क्रेडिट
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
आन्डेन्ड गोम्स व्यक्तिगत जीवनलाई थाहा पाउनेले तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। सुरू गर्न, उहाँ हो कि कसको हातमा हतियार महिलाहरु को लागी विरोध गर्न अत्यन्त गाह्रो छ। सबैले आन्द्रेको उत्तम कपाल र अनुहारलाई माया गर्नुहुन्छ।
आन्द्रे- विश्वको सबैभन्दा सुन्दर फुटबलर। क्रेडिट Pinterest
आन्द्रे गोमेम कुनै व्यक्ति हो जसले जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा लगभग केहि प्राप्त गर्न सक्दछ उसले आफैलाई प्रशंसा गर्छ। फुटबल खेलाडीहरु, हामी बाकी जस्तै, आफ्नो पाल्तुहरु लाई माया गर्छौ र आन्द्रे गोमेक्स अपवाद छैन।
आंद्रे गोम्स 'व्यक्तित्व (इन्स्टाग्राम को लागी क्रेडिट)
आधुनिक गेममा बाकी कुनै वफादारी छैन भन्ने कुराले निश्चित रूपमा आन्द्रे गोमेन्स, उसको कुत्ता (बेनी) र खेलिरहेको सम्बन्धमा सम्बन्ध राख्दैन। महान् चोरी स्वतः सोनीको प्लेस्टेशनमा।
आंद्रे गोमेक्स पर्सनल लाइफ तथ्य - उहाँले के गर्नुहुन्छ (इन्स्टाग्रामको लागि क्रेडिट)
अन्डर गमोहरू प्रशंसकहरूसँग हृदयघात व्यक्तित्वको रूपमा जान्छन्। उहाँ एक हर्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ब्लू सोमबार (माईन) मा टन र टन कोश प्रदान गर्न सक्दछ (जनवरीको दिन दिइएको नामले सबैभन्दा ठूलो निराशाजनक दिनको दाबी गरेको छ)। तलको भिडियो हेर्नुहोस्। Andre Gomes Instagram मा क्रेडिट।
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- LifeStyle
आन्द्रे गोम्सको निवल मूल्य छ जुन लगभग $ 15 मिलियन अनुमान गरिएको छ। प्रसिद्धि संग व्यवहार गर्ने उनको क्षमता पिचबाट आफ्नो जीवन निवारण गर्ने तरिकाको क्षमताको लागि सिधा आनुपातिक हुन्छ। आंद्रे गोमेम्स अडी, उनको सर्वश्रेष्ठ मोटरमोबाईल निर्माता जस्तै धेरै प्रीमियम कारहरुको मालिक छ।
आंद्रे गोम्स लाइफस्टाइल - उनको कार (सेलिब्रिटी अनफोल्ड को लागी क्रेडिट)
स्पेनमा क्यालोलोनियाका बार्सिलोनाका नगरपालिका कास्टेलल्डफेफल्समा उनीहरूको हवेलीको मालिक हो।
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
बलियो पारिवारिक समर्थन प्रणाली विश्वास र खेल सफलतामा सुधार गर्दछ। यो आन्द्रे गोमेसनले आफ्नो फुटबलिंग परिपक्वता चरणहरूमा भरपर्दो छ। तल फोटोको न्याय, यसको स्पष्ट आंद्रे गमोम्ससँग धेरै आनन्दित परिवार छ।
आंद्रे गोम्स परिवार फोटो (इन्स्टाग्रामको लागि क्रेडिट)
आन्द्रे गोम्स एक पटक भने उनले बार्सिलोनालाई स्वीकार गरे किनभने उनको आमाबाबुले आफ्नो बचपनको समयमा एफसी बार्सिलोनालाई गम्भीर रूपमा हेरे। उनको शब्दमा ...
"मलाई मेरो आमाबाबुले मलाई गर्व गर्न चाहानुहुन्छ। म म हुँ हुँ र म यहाँ बार्सिलोनामा छु, त्यो सबैभन्दा बढी कुरा गर्दछ। तिनीहरूसँग क्लबको लागि बलियो भावनाहरू छन्"
आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
ती चीजहरू तपाईं अरेन्डो गमोहरूबारे थाहा पाउनुहुन्न:
एण्ड्रोइड गमोन्स अनल्ट बोल्ड - पूर्व पुरानो रोनाल्डो। एम्बुजेस्ट र विकिपीडियामा क्रेडिट
तपाईंलाई थाँहा थियो?... आंद्रे गमोहरू हृदयमा पुरानो विद्यालय फुटबल प्रेमी हुन लाग्छन्। उहाँका ठूला प्रशंसक हुनुहुन्छ मूल रोनाल्डो सट्टामा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आफ्नो पिताको लागि धन्यवाद, एक पटक पछि आर्यो पुरानो रोनाल्डो म्याड्रिडमा आफ्नो सक्रिय वर्ष र 2002 विश्व कपमा।
Jags को लागि प्रेम:
फिल जागील्याका ए.ए. ज्याज एन्ड्रइड गमोको सबैभन्दा अनुकूल भएको छ, जसले तिनलाई राम्रोसँग ग्यासिसन पार्कमा राम्रो बनाउन
एथेन्स गोम्स सर्वोत्तम मित्र एवरटनमा (जी। छविहरू को लागी क्रेडिट)
"म ज्यागको साथमा एक दिनमा सम्झन्छु, मैले प्रशिक्षणमा गएर कपडेहरू थिएन, त्यसैले उनले मलाई आफ्नो किट दिए! उनले मलाई प्रशिक्षण दिएर मान्छे र सबै चीजको लागि कहाँ जाने भनी बताए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?... असम्भव किट म्यान एक मित्र पनि हो डोमिनिक क्यालोभ-लेभिन.
आंद्रे गोमेक्स एक अद्वितीय छ भनेर जानिन्छ कसरत शैली जसले उनको पाटो र मोटो गुब्बारे पोजीटिङ् जोड्दछ। यो उहाँले विशेष गरी एफसी बार्सिलोनामा आफ्ना दिनहरूमा अभ्यास गर्नुभयो। तल यस्तो कसरतको भिडियो हो। एफसी बार्सिलोना ट्विटरको क्रेडिट।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो आंद्रे गोम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।